गायिका तिर्शना बुढाथोकीको बाथरुममा नुहाउदै गरेको नाङ्गो भिडियो बाहिरियो
चैत २०, काठमाण्डौँ ।
तिर्सना बुढाथोकी नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा नयाँ नाम होइन । धादिङ सल्यानकोटमा पिता नारायण बुढाथोकी र माता सरस्वती बुढाथोकीको कोखबाट जन्मिएकी तिर्सनालाई कलाकारितामा सानैदेखी रुची थियो । यही तिब्र रुचीकै कारण लहलहहैमा मिडियामा आउन तिब्र इच्छाका कारण मोडलिङमा आएको बताउने तिर्सना यस क्षेत्रमा आउन जति सहज छ त्यो भन्दा कयौ गुणा बढि संबेदनशिल क्षेत्रको रुपमा रहेको बताउँछिन ।मोडल भनेको सामान्यतया प्रदर्शन गर्नु वा देखाउनु नै भएपनि यसलाई समाजले अझै पनि पुर्ण रुपमा स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय अर्चना पनेरु जस्ता नयाँ सोच भएका ब्यक्तिहरुको आगमन भइसक्दा समेत समाजभित्र यसबारेमा अझै भ्रमहरु बाँकी नै रहेको उनी बताउछिन ।
यसैले परिवारले पनि खुलेर समर्थन गर्ने अवस्था बनि नसकेको तिर्सनाको बुझाई छ ।बर्तमान समयमा म्युजिक भिडियोमा ब्यस्त रहेको बताउने तिर्सना राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढेको बताउँछिन । हट फोटो सुट मन पराउने उनी हालसम्म अबिवाहित साथै आफुलाई माया गर्ने प्रेमीको खोजीमा रहेको बताउछिन । सेक्सका सम्बन्धमा गरीएको प्रश्नमा मन मिल्ने ब्यक्ति भएको खण्डमा शारिरिक आवश्वक्ता हो भन्ने बुझाई राखेर यसको प्रयोग गर्न हिच्किचाउन नपर्ने उनको बुझाइ छ । यसै अर्थमा आफु सेक्सको नयाँ परिभाषाको खोजीमा रहेको र साँचो सेक्स पाउन गाह्रो भएको समेत उनको बुझाइ छ ।
पुरुषको कुन चै अंगले आर्कषित गर्छ भनिएको सोधीएको प्रश्नमा सर्वप्रथम त बोल्ने शैली त्यसपछाडि नाक र आँखाले आर्कशित गर्ने कुरा हामीसँगको कुराकानीमा बताईन । यो क्षेत्रमा आएर के पाउनुभयो भनि सोधीएको प्रश्नमा थोरबहुत चर्चा र तिब्र इच्छा केही हदसम्म पुरा भएको र आगामी दिनमा पनि मोडलिङमै निरन्तर रहिरहने बताइन ।आफु स्वयमको बारेमा भने आफ्नो अंग नै प्रदर्शन गर्न लायक भएको कारण नै प्रश्तुत गरेको भन्दै आफ्ना शरिरका आँखा देखी लिएर स्तन, नितम्ब सबै कुराले साथ दिएकै कारण आफु अगाडि बढ्न सफल भएको बताइन ।
बेला बेलामा विभिन्न कारणले चर्चामा आउन माहिर मानिने मोडल तिर्सन बुढाथोकी पछिल्लो समयमा चलचित्र सगैं केहि म्युजिक भिडियोको छायांकनमा व्यस्त छिन् । बलिउडकी पुनम पाण्डे समेत भनेर कहलिएकी तिर्सना बेला बखतमा आफ्नै नग्न फोटोसुट गरेर पनि विवादमा आइरहेकी हुन्छिन् । उनैं तिर्सना बुढाथोकीसँग मोनिका रसाईलीले गनुभएको कुराकानी –
तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्
१.तिर्सना बुढाथोकीलाई बलिउडकी पुनम पाण्डे भनिन्छ नी ?
म पुनम पाण्डे होइन,म तिर्सना बुढाथोकी हुँ । मलाई पुनम पाण्डे भनेर दिएको नाम पत्रकार मित्रहरुले र मेरा फ्यानहरुले हो । मलाई बलिउडकी पुनम पाण्डे भनेर अर्थात पुनम पाण्डेसँग तुलना गरेर म चिनिन पाउदाँ निकै खुसी छु ।
२.बेला बेलामा नग्न फोटोसुट गरेर बिबादमा आइरहनु हुन्छ,मोडल भएर त्यस्तो गर्न मिल्छ ?
बेला बेलामा नग्न फोटोसुट गरेर बिबादमा आउन कसलाई पो मन हुन्छ र । त्यस्ता फोटो सुट गर्ने र त्यस्ता हर्कतहरु मोडलहरुले नै त गर्ने हो ? चर्चामा आउन र नाम कमाउन नग्न फोटो सुट गर्ने मोडलहरु मध्य म पनि पर्छु ।
३.तिर्सनालाई सेक्सी गर्ल भनिन्छ नी ?
हो र ? मलाई खुसी लाग्यो । मलाई अरुले सेक्सी गर्ल भन्दा निकैनै खुसी हुने गर्छु । संसारमा दुई थरीका अथवा दुई किसिमका यूवतीहरु हुन्छन् एउटा व्यूटिफुल गर्ल र अर्को सेक्सी गर्ल र मलाई सेक्सी गर्ल मनपर्छ । म सेक्सी गर्ल पनि हुँ । मलाई सेक्सी गर्ल जति भनेपनि पचाउन सक्छु र मलाई अझ भनुन जस्तो लाग्छ ।
४.अहिलेसम्म तपाईले केहि म्युजिक भिडियो र केहि चलचित्रमा पनि अभिनय गर्नु भएको छ । तपाईलाई कस्तो चलचित्रबाट अफर आयो भने अंग प्रदर्शन गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
सबैले बसेर हेर्न मिल्ने खाल्को फिल्महरु हुनुपर्छ र दर्शकहरुले चलचित्र रुचाउने खाल्को हुनुपर्छ यदि त्यस्तो चलचित्रबाट अफर आयो भने अंग प्रदर्शन मात्र होइन बेड सिन दिन पनि तयार छु । म अंग प्रदर्शन र आइटम डान्सका लागी चलचित्र खेल्दिन चलचित्रको सबै पक्ष बलियो हुनुपर्छ र कथाले मागे जस्तो पनि दिन तयार छु ।
५.तिर्सनालाई बेला बेलामा बिबादमा आउन मन पर्छ हो ?
बिबादमा आउन कसलाई पो मन पर्छ होला र । म आफैं चाहेर बिबादमा आउने गरेको छैन मलाई विवादमा ल्याउनेहरु अरुहरु नै छन् । मलाई ब्लाकमेलिङ्ग गरेर विवादमा ल्याइने काम गरिन्छ । तर म आफैंले चाहेर भने होइन ।
६.शरिरलाई तन्दुरुस्त राख्न सेक्स आबश्यक छ भन्नु हुन्छ,तपाईको शरिरलाई तन्दुरुस्त राख्न सेक्सनै आबश्यक हो ?
हो हाम्रो शरिरलाई तन्दुरुस्त राख्न सेक्स नै आबश्यक छ र सेक्सले नै शरिरलाई तन्दुरुस्त राख्छ । सेक्स एउटा शरिरलाई मात्र नभएर हरेक मानसिकता,शाररिक दुबैलाई अति आबश्यक छ । सेक्सले माइन फ्रेस बनाउने काम गर्छ ।
७.अबको १० बर्षपछि तिर्सना बुढाथोकीलाई कस्तो अबस्थामा देखिन्छ ?
अबको १० बर्षपछि त म बुढी भइसक्छु । सायद अबको १० बर्षपछि विश्वकै चर्चित व्यक्ति बन्छु र यहि मोडलिङ्ग क्षेत्रमै हुन्छु ।